ဒါကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ် တံခါးကောင်တာသာဘက်ထရီအားဖြင့် powered ။ ငါတို့အတော်များများ တံခါးကောင်တာ မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ plagiarism ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကြောင်းအရာသိပ်မထည့်ခဲ့ပါ။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်ထံပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် တံခါးကောင်တာများ.
ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအရေအတွက်သည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ ပထဝီအနေအထား၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ အသွားအလာနှင့်အခြားအချက်များလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအရေအတွက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ကိန်းဂဏန်းများကိုသိပ္ပံနည်းကျနှင့်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးစျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအချိန်မီပြုလုပ်နိုင်သည်။ တိုးတက်မှုတစ်ခု စျေးကွက်စီးပွားရေးပုံစံ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္,၊ ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းသည်စျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
HPC001 တံခါးကောင်တာသည်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုကိုရေတွက်ရန်အတွက်ရေတွက်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်။ ပေါ့ပါး။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာအစပြည့်စုံသောဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်။ ဖောက်သည်အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုစူပါမားကက်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်စတိုးဆိုင်ဝင်ပေါက်အားလုံးတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး HPC001 တံခါးကောင်တာများကုန်သည်များကိုစနစ်တကျကိုးကားရန်အဆင်ပြေသည့်နေ့၏အချိန်တိုင်းတွင်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအရေအတွက်ကိုအလွယ်တကူတွက်ချက်နိုင်သည်။ ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲများကြောင့်reasonရိယာတစ်ခုလုံးကိုမျှတစွာဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ လူသားအရင်းအမြစ်များကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာစီစဉ်နိုင်သည်။ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်စူပါမားကက်များ၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ခရီးသည်စီးဆင်းမှုကိုအချိန်ကာလအမျိုးမျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစားနေရာများ၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ အများပြည်သူနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။
1. HPC001 တံခါးကောင်တာ သည်တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်မျိုးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည်။
၂.၁.၁၅ လက်မ LCD မျက်နှာပြင်။
၃ တံခါးကောင်တာများ လည်ပတ်ရန်အတွက်ခြောက်လတစ်ကြိမ်ဘတ်ထရီကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
၅ တံခါးကောင်တာ Windows မှတစ်ဆင့်တန်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။ အပိုဆော့ဖ်ဝဲမရှိပါ။
အရွယ်အစားသေးငယ်သော (113 * 67 * 20 mm) နှင့်အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော 213 ဂရမ်။
၇ တံခါးကောင်တာများ တစ်ယောက်ယောက်ဖြတ်သွားတဲ့အခါ display တက်လာလိမ့်မယ်။
၁၀။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂.၅ မီတာအကွာအဝေးတွင်သာရေတွက်နိုင်သော်လည်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိပဲ ၉ မီတာအထိအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။
၁၁ တံခါးကောင်တာများ internal memory သည်အနည်းဆုံးနာရီ ၅၀၀ မှတ်တမ်းများသိုလှောင်နိုင်သည်။
၁၃ တံခါးကောင်တာများ ဒေတာကိုနေ့စွဲနှင့်အချိန်အားဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ IR အမျိုးအစားများစွာရှိသည် တံခါးကောင်တာ, 2D, 3D, AI အ တံခါးကလူကောင်တာ, သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုအမြဲရှိသည်, ကျေးဇူးပြု။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့အသင့်တော်ဆုံးအကြံပြုလိမ့်မည် တံခါးကောင်တာ 24 နာရီအတွင်းသင်တို့အဘို့။
MRB တံခါးမှလူများသည် HPC005 ဗီဒီယိုကိုတန်ပြန်သည်
ရှေ့သို့ MRB အလိုအလျောက်အသုံးပြုသူများသည် HPC005S ကိုတန်ပြန်သည်
နောက်တစ်ခု: HPC002 ရေတွက်သူများအတွက် MRB လက်လီရောင်းဝယ်ရေးကောင်တာ
Infrared Beam ကောင်တာများ
Infrared Beam ကိုရေတွက်သည်
Infrared Beam ကိုလူ ဦး ရေ